MADAXWEYNE MUUSE BIIXI :- SAFARKIISA UGU HOREEYA MA ITOOBIYA AYUU KU TAGI DOONA MISE DJABUUTI | Saxil News Network
MADAXWEYNE MUUSE BIIXI :- SAFARKIISA UGU HOREEYA MA ITOOBIYA AYUU KU TAGI DOONA MISE DJABUUTI
Hargaysa:-(saxilnews.com) Muuse Biixi Cabdi waxaa la filayaa in marka uu dhameysto dhismaha xukuumadiisa uu safar ugu baxo dalalka Dibada , gaar ahaan dalalka xidhiidhka dhaw iyo wada shaqeynta la leh jamhuuriyada Somaliland . Madaxweyne Biixi oo la filaayo in ay soo gaadhaan marti qaadyo ay soo direen dalalka Somaliland xidhiidhka dhaw la leh oo ay kaga codsanayaan in uu dalkooda ku tago booqasho ugu sareysa ayaan la garaneen dalka uu socdaalka ugu horeyaa ku tagi doono .
Dadka siyaasada dibada ee Somaliland faleeya ayaa sheegaya in madaxweyne Muuse safarkiisa ugu horeeya uu ku tagi doono dalalka jaarka gaar ahaan Jabuuti iyo Itoobiya .
Waxaa la aamisan yahay in labadaas wadan ba ay madaxweyne Muuse Biixi ay u soo direen marti qaad rasmi ah lakiin socdaalka ugu horeeya ee madaxweyne Muuse Biixi iyo dalka uu ku tagaaba waxaa ay ku xidhan yahiin sida uu uga shaqeeyo wasiirka arimaha dibada , waxaase uu safarkaasi noqon doonaa mid muujin doona ijtaaha siyaasadeed ee madaxweynaha .
Madaxweyne Siilanyo safarkiisii ugu horeeyey markii la doortey 2010-kii waxaa uu ku tagay dalka Jabuuti , waxaana madaarka ku qaabilay madaxweyne Ismaciil Cumar Geele , safarkiisii labaad-na waxuu ku tagay dalka Itoobiya ,waxaana madaarka ku qaabilay Raysal wasaare ku xigeenka wakhtigaas oo hada ah Raysal wasaaraha dalka Itoobiya .
Waxaa la sheegi doona oo dadka xidhiidhka caalamiga ah falanqeeyaa ay isku hayaan dalka uu madaxweyne Biixi ku tagi doono socdaalkiisa ugu horeeya , gaar ahaan in uu go,aansan doono jidkii labadii madaxweyne ee ka horeeyey ee Siilanyo iyo Riyaale ee laba duba ka bilaabeen dalka Jabuuti iyo in uu ka baydhi doono dalka Itoobiya .
Labada tii uu yeelaaba waxaa ay ibo fur u noqon doontaa nooca xidhiidh ee ay Somaliland la yeelan doonto dalalkaas